तपाई आफ्नो भन्दा अरुको अलोचना बढी गर्नुहुन्छ ? तर किन त जान्नुहोस् | NepalDut
तपाई आफ्नो भन्दा अरुको अलोचना बढी गर्नुहुन्छ ? तर किन त जान्नुहोस्
ख्याल गर्नुहोस् त, जब हामी एकअर्कासँग भेट्छौ । साथीभाई बस्छौ । तब तेस्रो पक्षको बारेमा टिप्पणी गर्न थाल्छौ । ‘फलानो यस्तो, फलानो उस्तो’ भन्दै । हामी उक्त व्यक्तिको नराम्रो कुरा मात्र खेलाइरहेका हुन्छौ, खोतलीरहेका हुन्छौ । अनावश्यक र मनगढन्ते टिकाटिप्पणी गरिरहेका हुन्छौ ।
जबकी हामी यसरी जमघट भइरहँदा कहिल्यै तेस्रो व्यक्तिको गुणगान गाउँछौ रु तोस्रो सकारात्मक र राम्रा कुराहरुबारे चर्चा गर्छौ रु
यो दुर्लभ वा अपवाद हुनसक्छ । किनभने अक्सर हामी अरुको निन्दा गरेर आफु रमाइरहेका हुन्छौ । अरुको बारेमा नराम्रो कुरा गरेर, अरुको बारेमा नराम्रो चर्चा गरेर हामी आनन्द लिइरहेका हुन्छौ । हाम्रो प्रवृत्ति के हुन्छ भने, अरुको गल्ती कमजोरी सजिलै पहिल्याउने । अरुले के गल्ती गर्छ, अरुको कमजोरी के छ रु हामी फटाफट भन्न सक्छौ । खुट्याउन सक्छौ ।
आफ्नो गल्ती/कमजोरीमा किन हाम्रो मुख टालिन्छ ?
संभवत त उनको मुख टालिनेछ । उनको वाक्य फुट्ने छैन । चुपचाप बस्नेछ । किनभने अरुको गल्तीरकमजोरी खोतल्नेहरुले आफैतिर भने कहिल्यै फर्केर हेरेका हुँदैनन् । आफ्नो गल्ती कहिल्यै देख्दैनन् । कमजोरी देख्दैनन् । त्रुटी देख्दैनन् । अरुको चियोचर्चा गर्दागर्दै आत्ममूल्यांकन गर्न भुल्छन् ।
हामी अरुको नराम्रो कुरा कति सजिलै पहिल्याउँछौ रु यदि कुनै व्यक्तिको नाम लिएर हामीलाई ‘फलानोको बानी कस्तो छ रु फलानो कस्तो मान्छे हो रु’ भनेर सोधियो भने हामी फटाफट जवाफ दिन थाल्छौ । कनीकुथी उनको गल्ती र कमजोरी औल्याउन थाल्छौ । प्रश्नकर्ताले उनको नकारात्मक कुरा मात्र सोधेका हुँदैनन् । तर, हामी उनको सकारात्मक कुरा भन्दै भन्दैनौ ।
वास्तवमा यो एक किसिमको मनोविकार हो । हामी यस्ता दुषित मनोविकारले यति ग्रस्त छौ कि, हाम्रो इन्द्रियले पनि ठिकसँग काम गर्न सक्दैन । अरुले राम्रो भनेको, अरुले राम्रो गरेको, न हामीसँग सुन्ने कान छ, न हेर्ने आँखा छ । न त बुझ्ने मन नै छ । हामी अनुभूत पनि गर्दैनौ ।
हामी मानविय मूल्य र मान्यताबाट पन्छिदै गएका छौ । भौतिक सुख(सयलको भोग एवं तृष्णाले हामीलाई व्याकुल बनाएको छ । त्यही कारण हामी मानविय जीवन बाँच्न भुल्दैछौ । हामी आफैलाई अवगुण र विकारको भण्डार बनाउँदैछौ, त्यही कारण अरुलाई हामी खराब, नराम्रो, दुर्गुणी, कमजोर देखिरहेका छौ । यो हाम्रो आफ्नै दृष्टिदोष हो ।
हामी अरुको कुरा किन काट्छौ रु किन अरुको अवगुणको मात्र चर्चा गर्छौ ?